अहिलेको सत्ता संघर्ष दलाल पुजीवादी व्यवस्थाको गम्भीर रुप हो : लक्ष्मण बर्देवा - Yugantar Khabar | News Portal
लक्ष्मण बर्देवा हाल श्रमिक जनता पार्टी गठन गरी अघिबढिरहेका छन् । वामपन्थी विचार नै किन समर्थन गर्नुभएको भन्ने प्रश्नमा भन्छन् वामपन्थीहरुले पञ्चायत विरुद्ध लडेको, उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको लागि लडिरहेको लडिरहने पार्टी भन्ने बुझाई रह्यो । तर कालान्तरमा काम गर्दै जाँदा मैले सोचे जस्तो रहेनछन् । उल्टो उत्पीडित समुदाय र क्षेत्रको साचो रुपमा लडेको देखिएन । यिनीहरुले झन हेप्ने, चेप्ने र अधिकार नै दिन चाहेनन् ।
त्यसरी श्रमजिवी जनताको लागि त्यही समुदायकै व्यक्ति चाहिन्छ भन्ने निक्र्यौल सहित पार्टी स्थापना गरेका हौं । हामी पार्टीलाई व्यापक बनाउने अभियानमा छौं । मुख्यतः सैद्धान्तिक वैचारिक र सागठनिक गतिविधिहरुमा ध्यान केन्द्रीत गरेका छौं । श्रमिक, किसान र दलितको पार्टी गठन गरी पछाडि पारिएका समुदाय, उपेक्षित, उत्पीडित क्षेत्र समुदायका लागि असली साक्षीको रुपमा काम गर्ने प्रण गरेका छौं, उनले बताए ।
श्रमजिवी जनता पार्टी किन ?
नयाँ सविधानले मजदुर, किसान, दलित, महिला, तराई मधेस लगायतको अधिकार सुनिश्चित गरेको देखिएन । समावेसी समानुपातिक र समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम र विषेश अधिकार सहितको आरक्षण जस्ता एजेण्डाहरु इमान्दारपूर्वक लागू गर्न खोजे जस्तो देखिएन । एकल जातिय शासक वर्ग एकहरु एक भएको मात्र अवस्था रहेको छ । मिलिजुली खाने र भ्रष्टाचार बाहेक केही गरेको छैनन् । जसबाट किसान, मजदुर, उत्पीडित समुदाय, तराई मधेस र उत्पीडित क्षेत्रको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने काम गरेका छन् । दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार देशमा चलिरहंदा देश र जनताको पक्षमा एउटा पनि सम्झन लायक काम गरेको अवस्था छैन । झण्डै अढाई वर्ष भईसकेको छ, वाम सरकार बनेको तर उपलब्धी केही छैन ।
कोरोना छैन भनेर निरन्तर भन्नु भयो नि ?
यत्रो कोरोनामा पनि वाम सरकारले कमाई खाने भाँडो मात्र बनायो । जनतालाई तर्साइयो मात्र । राहत केही दिन सकेन, चाहेन । यसै पनि कोरोना भन्ने नै छैन, मैले त निरन्तर भन्दै आएको छु । यो एक हाउगुजी हो, राजनीति हो । विश्व मेडिकल माफियाहरुको खेल हो । भाइरस आखिर बनाउन पनि मिल्छ नि । त्यही त भईरहेको छैन भन्ने आशंका भने रहेको छ । गरिब देशलाई गरिब नै बनाउने र धनी राष्ट्र धनी नै हुने र अर्को धनी राष्ट्र हुन प्रयत्न गरिरहेका राष्ट्रलाई कमजोर बनाउँने राजनीति हो । आखिर कोरोना भन्ने हाउगुजी फैलाएर कति राष्ट्रहरु आर्थिक रुपमा टाड पल्टन लागेको अवस्था छ । नेपालमा त झन पर्ने भईहाल्यो ।
कोरोना रोग हाउगुजी थियो भने विश्व आक्रान्त बन्यो त ?
किनकि हाम्रा शासक वर्ग दलाल पूजीवादको संरक्षर गर्दै कमिशन मात्र खान पल्केका छन् । आन्तरिक उत्पादन केही छैन । त्यसरी आर्थिक संकट ल्याउन तत्पर छन् हाम्रा शासक वर्ग । यसको हामी घोर भत्सना गर्दछौं ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले पनि दलित समुदायले दुख पाईरहेका छन् नि ?
तपाईले ठिकै प्रश्न गर्नुभयो । प्रेम भएको र विवाहमा परिणत हुन लागेको नवराज विक लगायतको कुटीकुटी मारेर भेरीमा फालियो । हामी लगायत मुख्यतः हाम्रो पार्टी श्रमिक जनता पार्टीले अग्रभागमा रहेर आन्दोलन ग¥यौं । हामी लगायत सम्पूर्ण दलित अगुवा, नेता र अधिकारकर्मी लगायतको दवावमा कानुनी प्रक्रिया रहेको छ । हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । यस घटनाले पनि देखायोे कि दश वर्ष लडेकाहरुले समेत एउटा विज्ञप्ती समेत निकालेनन् ।
राजावादी आन्दोलन हुदाहुदै केपी ओलीले संसद विघटन गरेसंगै सेलायो, अहिले त संसद नै ब्युतियो नि ? यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राजनीतिक बहसको कुरा गर्दा राजावादीहरुको जुज आन्दोलन चलिरहेकै छ, सांस्कृतिक राजाको पक्षमा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहनु भएको छ । नेपालमा गणतन्त्र आउँदै गर्दा तत्कालिन राजासंग उनले सम्झौता गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ । केपी ओली गणतन्त्रवादी होइनन् । उनले बयलगाढा चढर अमेरिका पुगिदैन उनले भनेकै हुन् । प्रचण्ड पनि गणतन्त्रवादी होईनन् चुनवाङ बैठकमा राजा मान्ने र आफु निरन्तर प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्तावमा बाबुराम भटराईले मानेनन् उनी गणतन्त्रको पक्षमा उभिएपछि उनी माथि कारवाहीको दण्द अपनाईको थियो । २०६२,६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा गणतन्त्र सहितको संघीयता आयो तर हालको अवस्थामा भारत खुसी हुन सकेन । संविधान नै स्वीकारेन । त्यसैले त अहिलेको राजनीतिक अवस्था देखा परेको हो । संसद विघटन र ब्युँतिने यि सबै ओलीलाई नै सिध्याउने काम भएको हो । पस्चिमा तथा अमेरिका चीन र भारत सिधै हस्तक्षेप गर्न लागि परे । त्यसैले केपीको सत्ता धरापमा पर्यो । त्यसरी उनी आन्दोलन भईरहेको वहाना गर्दै संसद विघटन वा भंग गर्न चाहन्थे र गरे पनि । उनले जुन उग्र राष्ट्रवाद देखाएका थिए जुन अमेरिकाको चुनापमा डोनाल्ड ट्रम्पको पराजयले प्रस्ट गरिसकेको छ । त्यही पनि केपी ओली राष्ट्रवाद प्रष्ट भईसकेको छ । अब केपी ओलीको राष्ट्रवाद समाप्त हुन्छ र देखियो पनि । जसमा भारतले ठुलो भूमिका खेल्यो ।
अब लोकतन्त्र धरापमा परेको हो ?
आज विश्वमा पूर्ण प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको माग भईरको छ, आखिर हुनुपर्ने पनि त्यही हो । त्यसका पनि ओली सांस्कृतिक राजाको पक्षमा रहेका छन् । सेना अझै पनि लोकतान्त्रिक छैन अनि कर्मचारी पनि । यथास्थिति र पुरानै धर्रामा रहेको छ । अहिले संसद ब्युँतिदा सबै भन्दा गाह्रो दुई कित्तामा रहेको नेकपा र नेपाली काँग्रेस सबै पक्षलाई रहेको छ । किनकि उनीहरुकै नेतृत्वमा संघीय गणतन्त्र र संविधान आएको हो । बाबुराम र उपेन्द्र यादवलाई गाह्रो छ । त्यसैले संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र यदि लोकतन्त्र मान्ने हो भने प्रतिक्रान्ति थियो । त्यसैले संसद ब्यँतिने प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई बचाउने काम काम गरेको छ ।
वामसरकार तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हुन् ?
उनीसंग नेपाली जनताले धेरै आसा गरेका थिए । तर विडम्वना वाम सरकार पद पैसा र सत्ताको लागि मरिहत्ते गर्ने व्यत्तिहरुको झुन्ड बन्यो वा त्यहि ढंगको चाहनामा अघि बढिरहे । चुनावका बेला सस्ता र लोकप्रिय नारा दिएर कपोकल्पिक राष्टवादको नारा दिदै केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर प्रधानमन्त्री बनेपछि भ्रष्टाचारमा लिप्त भए । महंगी, कालोबजारी, हत्या हिंसा बढिरहेको छ, त्यसको कुनै नियन्त्रण छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारको रोग पुरानै हो । संगठित र संस्थागत भईसकेको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने कुनै कार्यक्रम बनाएनन् । बरु अहिले सम्मकै भ्रष्टाचार बढेर गयो । मानिसलाई सबै भन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी भनिन्छ । त्यसैले सबै भन्दा पहिले मानिसले आफुलाई सर्वमान्य विचारमा ढाल्नुपर्दछ । मान्छेको मनमा रहेको पूरानो रुढीवादी संस्कारलाई त्याग्नू पर्दछ । को के कुन जातको आघारमा वा धर्मको आधारमा लिंग वा वर्गको आधारमा मानवले मानवलाई हेला र हेपाई राख्नु हुदैन । सबै मानव एउटै हो भन्ने मानवीय धर्म वा मानवीय सिद्धान्त विकास गर्नु पर्दछ भन्ने मेरो विचार रहेको छ ।
दलित समुदायको ऐतिहासिकतबारे बताईदिनोस न ?
मनुस्मृति, मल्लकालिन धार्मिक तथा वर्ण व्यवस्था र त्यसलाई संस्थागत गर्दै राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले १९१० मा मुलुकी ऐन नै जारी गरी जातीय तथा धार्मिक शासन चलाए । त्यसरी संसथागत भएको नेपालको जातीय शासन सत्ता आजको २१ औं शताब्दीमाा पनि उस्तै रहेको छ, विभेद हटेको छैन । त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो, २०७७ जेठ १० गतेको घटना । रुकुम (पश्चिम) चौरजहारीको सोतीमा भएको उक्त घटना जति निन्दा गरे पनि अपुग हुन्छ । जाजरकोटका नवराज विक रुकुमकी सुस्मा मल्लसंग विगत तीन वर्षदेखि प्रेममा रहेको र उनै प्रेमिकाले विवाहको लागि अनुरोध गरेपछि साथीहरु जम्मा गरेर उनी प्रेमिका लिन हिडें । तर विडम्वना उनको कदम विफल मात्र भएन उनी सहित ६ जनाको हत्या भयो । भेरी ४ का २१ वर्षीय नवराज विक, चौरजहारी १ का २० वर्षीय टिका सुनार, भेरी ४ का २१ वर्षीय सञ्जु विक, १७ वर्षीय गणेश वीएम, भेरी ११ का १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार र गोविन्द शाहीको लखेटी लखेटी स्थानीयद्धारा हत्या गरियो ।
छुवाछुतका यस्ता घटना किन दोहोरिरहेका छन् ?
एक मानवता विरोधी अपराधको रुपमा लिईएको उक्त घटना इतिहासमा फेरी एक पटक दोहोरिएको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको व्यवस्थासम्म आईपुग्दा पनि दलित समुदायलाई परिवर्तनले छोएको रहेनछ । त्यसैले यस्ता घटना दोहोरिरहेका छन् । स्मंरण रहोस् पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन २०६८ पछि विभिन्न निहुमा १७ जनाले दलितले ज्यान गुमाउन पुगे । मानव मानव बीचमा पनि जातीय आधारमा यस्तो घटना हुनु अन्धविस्वास र जातीय शासन व्यवस्थाको पराकाष्ट हो । मानिसलाई प्रेम विवाह गर्न लागेकै आधारमा समाजले ठुलो जात र सानो जात भनेर त्यस्तो हुनु अहंकारवादी चिन्तन र घमण्ड रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
देशमा दलित समुदायले गरेको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनलाई सबैले विर्सन्छन् होईन त ?
अवश्य पनि हो । हाम्रा पुर्खाहरुले इतिहासकालमा पृथ्वीनारायण शाहको एकिकरण अभियानमा दलित समुदायको तर्फबाट बिसे नगर्ची वाडगे सार्की लगायतले दिनुभएको योगदानदेखि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म दलित सुमुदायले रगत पसिना बगाउनुको साथै नगन्य रुपमा शहिद भएका छन् । तर व्यवस्था परिवर्तन त भयो, शासक वर्गको मानसिकता बदलिएन । राज्यले कम्तीमा कानुन अनुसार यस्ता घटनाका दाषीलाई इमान्दार पूर्वक कारवाही गरिदिए मात्रै पनि दोहोरिने थिएनन् । विडम्वना राजनीतिक नेतृत्वको दबाब, मौन बसिदिनु र जिम्मेवार व्यक्तिहरुनै संलग्न हुनुले दोषीहरु उम्कीरहेका छन् । र रुकुम घटना पनि यसैको उपज हो । योजनाबद्ध रुपमा स्थानीय सरकार सहितको मिलेमतोमा घटना घटाईएको हो । मुख्य नेतृत्वहरु अथवा तीन वटै सरकार मौन रहनु, स्थानीय सरकार, नातावाद कृपावाद र शक्तिको आडमा यस घटना भएको हो ।
दलित समुदायलाई राज्यले नै सधै पूर्वाग्रही गर्यो भन्छन् नि ?
मानव विकासक्रमलाई हेर्दा श्रमजिवी वर्गलाई कमजोर बनाउने र शोसक शासक वर्गद्धारा पिडित हँुदै आएको देखिन्छ । मुठिभर वर्गले उत्पीडित वर्गलाई निरन्तर शोषण गर्दै आएको छ । दलित भन्ने जुन समुदाय छ, उनीहरु समाजक्रमको हरेक पक्षमा श्रमसीपबाट समाज विकास र सभ्यतालाई सघाउनुको साथै सीप कलाको धनी मानव जातीलाई नै उनीहरुले योगदान दिदै आएको र आजको दिनमा पनि त्यो क्रम रोकिएको छैन र आउने दिनमा पनि रोकिने देखिदैन । किनकि राज्य गम्भीर देखिदैन ।
मानिसले आफुलाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी भन्दै आएको छ, जुन व्यवहारमा ढाल्नु जरुरी छ । अर्को दलित समुदाय एक जुट हुन आवश्यक भईसकेको छ । मल्ल्लकालिन समय, मनुस्मृति र धार्मिक तथा वर्ण व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने सन्की शासकबाट चलन चलाउँदै आए । त्यो गलत परम्परालाई निरन्तरता दिने काम अहिलेका शासकहरुको पनि उहि चिन्तन, प्रवृत्ति, अन्धविस्वास, परम्परावादी, सामन्तवादी सोच र कुप्रथाबाट ग्रसित छ । आजको २१ औं शताब्दीमा पनि मानव मानवबीच यस्ता घटनाक्रम दोहोरिनु विश्वसामु विडम्वना रहेको छ ।